Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamada-Sare ee Maraykanka oo Dhaqan Galisay Xayiraadii Muslimiinta.
Maxkamada-Sare ee Maraykanka oo Dhaqan Galisay Xayiraadii Muslimiinta.
Posted by ONA Admin	/ December 5, 2017
Maxkamada sare ee dalka Maraykanka ayaa ogolaatay in la dhaqan galiyo Xayiraadii xukuumada Trump ay kusoo rogtay dadka ka imaanaya lix wadan oo Muslimiin ah oo ay ku jirto Soomaaliya.
Maxkamada Sare oo ka kooban 9 Garsoore ayay labo kamid ah kasoo horjeesteen sharcigan uu soo saaray Trump markii uu xilka qabtay, walow ay marar badan dhaqan galinta sharcigan diideen maxkamadaha darajada koowaad oo ku tilmaamay sharcigan mid ka horimaanaya dastuurka ama ku salaysan isir-sooc loogu talagay muslimiinta.
Dowlada Maraykanka ayaa liiskan dalalkaasi ku dartay mar danbe muwaadiniinta wadamada Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Balse sharcigan ayaa ah mid ahmiyada laga leeyahay ay tahay dhaqan galinta balanqaadkii Trump xiligii uu ololaha doorashada ku jiray oo uu sheegay in uu dalka Maraykanka u diidi doono in ay soo galaan dadka Muslimiinta ah.
Inkasta oo dhaqangalinta sharcigan ay ogolaatay ugu danbey Maxkamada Sare, balse qeybo kamid ah sharcigan oo dacwadaha laga keenay ay wali horyaalaan Maxkamada Racfaanka ayaa la sheegay in dib loo dhigi doono, illaa inta maxkamadaha Racfaanka ay go’aankooda ku dhawaaqayaan.